Lully Posada: Tiako ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Lully Posada: Tiako ny Global Voices
Voadika ny 14 Jolay 2019 13:51 GMT
Tamin'ny volana Febroary 2010 no nanombohako tato amin'ny GV rehefa nasain'i David Sasaki aho. Mpanoratra sady mpandika teny aho. Maro ny fahafaham-po azoko, anisan'izany ny fandavana ny Lalàna Lleras izay natao hametrahana ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona any Kolombia. Nanampy ihany koa izany tamin'ny fanakanana ny Lalàna nikasana hametrahana ny fanabeazana any Kolombia izay mety hampisy fiantraikany amin'ny tombontsoan'ny olom-pirenena Kolombiana. Nalaza ny lahatsoratra momba izany lohahevitra izany ary nozaraina tamin'ireo olona maro niaraka tamin'ny akony avy amin'ireo olona an'arivony sy mpikatroka ao Kolombia.
Niteraka fientanentanana lalina tato anatiko ny fandraisana anjara tato amin'ny Global Voices ka nandrisika ahy hahazo diplaoma toy ny Fifandraisana Ara-tsosialy sy nahavitako ny fianarako tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy tamin'ny volana Desambra 2013. Zava-niainana nahafinaritra ny hafanana sy ny kalitaon'olombelona nisy tao anatiny satria mianatra ny dingana rehetra sy manamafy orina hatrany hatrany, fa ambonin'izany rehetra izany, ny fanamboloana mahaolombelona teraka tao anatin'ny fampitomboana fanentanana ara-tsosialy mitady hatrany ny fandrosoana sy ny fiovana ara-piarahamonina. Ary tena manan-danja ihany koa ny fiarovana ny fitantanana aterineto sy ny fahalalahana maneho hevitra.
Anisan'ny tambajotra Hiperbarrio (iray amin'ireo mpandray fanohanana avy amin'ny Rising Voices) aho izay nandaniako telo taona tamin'ny fanampiana mavitrika tamin'ny fampiofanana sy ny fifandraisana tao anatin'ireo vondron'olom-pirenena Convergents, Villactivos ary The Esperanza. Tena nahatalanjona ny fifandraisana sy ny fifampianarana: ¡nanapongatra Vondrom-piarahamonina!
Tontolo tena misy sy maro kolontsaina ahafahana manao ny zava-drehetra ny Global Voices. Ny fifampizarana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amiko avy amin'ny Global Voices tany Kenya, Afrika tamin'ny taona 2012 ny iray tamin'ireo fahafinaretako lehibe. Nangalatra ny fanahiko ny fianarana kolontsaina samihafa sy ny fifampizarana fahalalana . Fahafaham-po iray hafa, nahazo fanohanana avy amin'ny toniandahatsoratra milay indrindra tahaka an'i Eddie Avila, Silvia Viñas, Juan, Ellery ary Gabriela aho.
Tsy hita isa ny fifamatorana mampifandray ny Global Voices; Mahafinaritra ny mijanona ho anisan'izany sy ny manaraka ny zavatra andrasana amin'ny fiarovana ny aterineto malalaka ary ny mikatsaka hatrany ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fiovana ara-tsosialy any Kolombia. Maniry ny hahita ireo tsingerintaona maromaro kokoa aho ary manantena ny hanatrika ny Vovonana 2015 manaraka!